- पृथीछक बुढा मगर
प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०७६, सोमबार १९:५४
एकाबिहानै निद्रा खुल्यो । तव सामाजिक संजालमा साउदी अरबमा मज्दुर गरिरहेका उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ का कुनै समयका अंगरक्षक हितमान बुढा मगरले एउटा मन छुने स्टाटस लेख्या थिए । कुनै पहाडी इलाका खिचिएको तस्विरसंग मिल्दोजुल्दो क्याप्सन बडो घतलाग्दो थियो । कुरा बुझ्दा त्यो डोल्पा सदरमुकाम दुनै आक्रमणको तयारीको भुगोल निरिक्षणको लागि जाने क्रममा मैकोटको बुकि पुपाल भञ्ज्याङमा खिचिएको तस्विर रहेछ । त्यस यात्राको क्रममा अहिलेका उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’, कालिबहादुर खाम ‘बिबिध’, जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, बर्षमान पुन ‘अनन्त’ र उनै पासाङका अंगरक्षक हितमान बुढा थिए ।
अरबमा हरेक शुक्रवार बिदा हुन्छ । बिदाको भोलिपल्ट काममा जानेवेला बडो उदेकलाग्दो हुन्छ । सायद उसले नयाँ नेपाल बनाउछु भनेर लडेको त्यो स्वर्ण उमेरको सपना याद गरिरहेको होला र आफुलाई सोधिरहेको होला कि यहि अबस्था भोग्नलाई हामीले त्यो लडाइँ लडेका थियौं ?
उनको स्टाटसको पूरा अनुच्छेद यस्तो थियो,
‘उहाँ उही पासाङ हुन् ५२ का कमाण्डर । म उनकै अंगरक्षक हुँ, सहयोद्धा पनि थिएँ । आज उनि आसिन महलमा छन् । अंगरक्षक भने रोडमा घुमिरहेको छ । तर मैले नभुझेको कुरा उनी बदलिएका हुन् कि समयले बदलिदिएको हो ? उनी सुरक्षा घेरामा छन् वा नजर बन्दमा ? जसले उनको ज्यान बचाइ दियो, उनीहरु नै बाहिरिएका छन्, जसले उनलाइ मार्न खोज्दथ्यो, उनिहरु नै अंगरक्षक बनेका छन् । उहाँ र हाम्रो भेटघाट हुनलाई अर्कै मान्छेको माध्यम चाहिन्छ । समय अबधि टोकिन्छ, उनै बैरिहरुले चेक जाँच गर्छन् र पासकार्ड दिन्छन्, गेटमा साब र एस सर भन्न्नु नै पर्ने हुन्छ । चाहेर पनि भेटघाट गर्न सक्दैनौ । हजारौं जनमुक्ती सेनाहरु, अंगरक्षकहरु गेटसम्म आउछौँ र हजुर बस्नु भएको आलिशान महल तिर हेरर फर्किन्छौं । पुरानो हुदैन माया, बिगतले भटभटी पोल्दो रहेछ । सम्झना मनै भरी छ है कमरेड ।’
डोल्पा सदरमुकाम दुनै आक्रमणको तयारीको भुगोल निरिक्षणको लागि जाने क्रममा मैकोटको बुकि पुपाल भञ्ज्याङमा खिचिएको तस्विर